OMYA MAGPRILL bụ mkpịsị ugodi maka owuwe ihe ubi nduku bara ụba na nke dị elu - Magazin Sistemu Potato
Poteto bụ ihe ọkụkụ na-achọ magnesium. Site na mkpụrụ nke 50-60 t / ha, a na-ewepụ 60-70 kg / ha nke magnesium oxide na ala. N'ime ala, ọtụtụ n'ime magnesium nọ n'ọnọdụ siri ike iru, ngụgụ dị njọ karịsịa n'ihe gbasara granulometric mejupụtara nke ala. Ọ bụ ya mere fatịlaịza magnesium dị irè na-etinye mgbe niile na teknụzụ nke ugbo dị elu. Mgbe niile, nke a bụ kpọmkwem mmetụta na olu nke akuku na starch ọdịnaya na tubers. Mkpa magnesium nwere ike ịbawanye na nnukwu doses nke fatịlaịza potash, ebe ọ bụ na potassium na magnesium bụ ndị na-emegide ya.
Na ala acidic, mgbe ị na-etinye Omia Magprill (nwere 25% calcium na 9% magnesium), ọ bụghị naanị ihe anụ ahụ na kemịkalụ nke ala na-akawanye mma n'ihi nkwụsị nke oke acidity, kamakwa nri nke osisi nwere calcium na magnesium. Omume OMIA Magprill dị ka ihe na-atọ ụtọ na fatịlaịza na-adịgide ruo ọtụtụ oge (dabere na dose na usoro ntinye), na isi ihe na-eme site na izu anọ mgbe ntinye na mgbasa nke ọgwụ na ala. Nke a ga-ekwe omume n'ihi micronized (n'ụdị ntụ ntụ ntụ) nke eke dolomite nke sitere na ngwaahịa ahụ. Mgbe egwerichara, a na-eme granules 2-6 mm site na ntụ ntụ, nke na-eme ka ngwa teknụzụ dị mfe ma na-enye ohere iji Omia Magprill na-enweghị usoro na mpaghara.
N'afọ 2021, a nwalere Omia Magprill na dose 300 n'arọ / ha na ịkụ poteto na-enweghị ogbugba mmiri n'ubi na mpaghara Yaroslavl. A na-akụ Gala dị iche iche n'ala aja aja. Mkpụrụ dị na njikwa ahụ bụ 28,2 t/ha, na mgbanwe ya na Magprill - 30,8 t / ha, nke bụ 2,6 t ma ọ bụ 9,2% karịa.
ngwaahịa Usoro, kg / ha Ọnụ ahịa ngwaahịa, rub./ha Mmụba mkpụrụ, t/ha Ọnụ nke ihe ọkụkụ ọzọ, rub./ha Ego ndị ọzọ, rub./ha
Magprill, KFH "Magro", mpaghara Yaroslavl 300 8487 2,6 26000 17513
Mmụba na mkpụrụ etịbe ma n'ihi na mkpokọta abawanye na uka nke tubers, na n'ihi na ukwuu mkpụrụ nke nnukwu ntakiri, nke bụ mkpa àgwà egosi maka marketable nduku.
Ngụkọta a na-eji ọnụ ahịa ugbu a maka Omia Magprill na ọnụ ahịa ogologo oge maka poteto - 10 rubles / kg. Mmụba a na-esi na ya pụta na-ekpuchi ụgwọ nke itinye ngwaahịa ahụ ma na-enye gị ohere ịnweta ego ọzọ nke 17513 rubles / ha.
Anyị na-achọ gị ihe ubi nduku dị elu, dị elu, nke nwere ike ịba uru n'ụzọ akụ na ụba!
eMail: info@omya-algol.com ekwentị: +7 495 925 56 30
Russia chọrọ ịmachi oke na akwụkwọ nri nke “borsch set”
Ntinye ego ndi oru ugbo: kedu nkwado ndi oru ugbo kwesiri ine n’aho a